Blog-Kubvarura: Catalyze, Iyo Yemagariro Network kune Software Kuvandudza uye Usability Nyanzvi | Martech Zone
Svondo, October 21, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pave nenguva kubva ini yakapa blog uye ini ndakayeuchidzwa nezvazvo mavhiki mashoma apfuura naTom Humbarger we Catalyze. Shanduko yebasa uye kondirakiti yepadivi yakadimbudzira kwazvo nguva yandaigona kushandisa pane yangu saiti zuva rega rega. Nekutenda, izvo zviri kutanga kutendeuka ikozvino.
Kutanga, Dzimwe Mhinduro pane Yakapfuura Blog-Kubvarura
Ndakawana izwi kudzoka kubva kuna André kuLendo.org kuti iyo shanduko dzandakakurudzira kune yake saiti zvakakonzera kuwedzera kusinganzwisisike kune vashanyi uye kuona peji. André akange aine vangangoita 290 vashanyi pazuva uye nezve mazana manomwe emapeji maonero pamberi pechinjo. Zvino, Lendo.org ane 1200 vashanyi vakasarudzika pazuva, uye nezve zviuru zvitatu zvepeji!!!
Nhasi, ndiri kuenda kunotaura Catalyze - Nharaunda yeBhizinesi Vanoongorora uye UX Nyanzvi - Vakasikwa Vanhu Vanogadzira Anoshamisa Software. Catalyze inopfuura kupfuura bhurogu, ndeyechokwadi pasocial network saka izvi zvichave zvakaoma! Tom akandipinza masvondo mashoma apfuura uye anga akamirira nemoyo murefu!
Unogona kuseka izvi, asi ini pachokwadi ndaifanira kuchera kuti ndione kuti "UX" zvairevei! Ini handina kuziva kuti yaive chidimbu cheMushandisi Chiitiko. Handina chokwadi chekuti vanhu vari kutsvaga pa "UX"… ungangoda kunyora "User Experience" mumazita emapeji, nezvimwe. Mukati mepeji, ungangoda kushandisa> chirevo> ma tag: UX kuitira kuti injini dzekutsvaga dzitsvake zvese izwi uye chidimbu.
Chichava chinetso, asi ini ndinokukurudzira chaizvo kuti upe zvinongedzo zvekudya pane rako rekumba peji. Kana iwe uchikwanisa kukudziridza yakazara feed yezvazvino zvinyowani, dzichangoburwa hurukuro hurukuro, uye pamwe zviitiko zvechangobva kuitika - izvo zvaizonyatso kupa yakawanda kukosha kune vaverengi.
Patsamba iyoyo, ndakaona kuti ndinogona kuwana RSS feed kubva kublog rako asi harina kubatanidzwa mumusoro wako wekubatanidza nemabhurawuza. Ese mabrowser azvino achatsvaga RSS chinongedzo chinongedzo mumusoro wemapeji ako uye ivo vachangoerekana varatidzira RSS kunyorera bhatani muKero Bar. Hezvino zvinoita kodhi
Heano maitiro anotaridzika kana iwe ukaenda kune rangu peji muFirefox:
Hezvino zvakaita peji rako.
Kana iwe ukaita kuti zvive nyore kuti vanhu vanyore kune yako saiti, iwe unowana vamwe vanyoreri. Ive neshuwa yekushandisa chishandiso senge Feedpress kutarisa kuti une vanyori vangani.
Dai ndaive Google Bot ndichikwenya peji rako reblog, ini ndaizonongedza peji rako se "Blog thumbarger"… pamwe asiri iwo mazwi akakosha awanga uchitsvaga. Kana iwe uchikwanisa kushandura ako mazita emapeji kune iwo chaiwo musoro wepeji, mu nyaya iyi: Iwe uri Design Funga? Catalyze Razvino Uchenjeri naTom Humbarger
Injini dzekutsvaga dzinoteerera kuti zvemukati zvakagadzirwa sei mumapeji ako futi. Panyaya yemablog ako, zita repositi rinongori chinongedzo nekirasi = "siblog_PostTitle". Izvo hazvisi kuzotaurira Injini Yekutsvaga kuti pane chero chinhu chakakosha nezve iyo Musoro. Kana iwe uchikwanisa kupinda mumatumbu echishandiso chako, ini ndaizoona kuti ndine misoro yekumaka, kungave> h1> kana> h2> ma tag akavhara yangu blog post zita. Ini ndaikurudzirawo kunyora zvinyorwa ndichishandisa ma tag emusoro futi.
Pamwe iro peji rine mukana wakawanda peji rako repamba. Iri ingori peji rimwe hombe remasangano kana rikaonekwa neinjini yekutsvaga. Dai raive peji rakamisikidzwa nemisoro uye zvikamu zvakamakwa saizvozvo, iwe waizokwanisa kuwana izvo zvemukati zvakarongedzwa zvirinani.
On your karenda peji pane Subscribe chinongedzo .. asi hapana pane iyi link yekunyorera kune. Ini ndaizove nechokwadi zvakare kuti iwe unongedzera iwo mazita emazita sezvandakanyora nezve mazita eblog.
Kuchera mune yako peji chimiro, ini ndinoona isinganzwisisike yakaoma maze yematafura uye divs. Ini handidi kutora bara kune vamwe vangu .NET vagadziri, asi ini ndinozviona izvi kazhinji zvinorwadza. Anogadzira .NET mushambadzi achave nenguva yakaoma yekutsvaga chinhu, saka anokanda tafura yakatenderedza kuti zviite nyore.
Matafura ari e data, divs uye masheetheet ndeemukati.
Funga nezvazvo nenzira iyi - kunyepedzera kunge uri wekutsvagisa injini uye urikuedza 'kuona' kuti ndezvipi zvirimo mune peji zvinobatsira kunongedza. Vanokambaira vanotora chidimbu chepeji… hapana anoziva kuti zviyero zvipi, asi havatore peji rese. Yako application ine yakawanda kwazvo fomati kodhi zvekuti zvakaoma kuti uwane izvo zvirimo! Uye nenguva yaunoita, iri hafu yepasi peji. Maitiro aya akajairika mukuvandudza kweNET. Zvinoita kuti iko kunyorera kuve nyore kunyora, asi zvinonetsa kune vanokambaira kuti vaverenge. Kana paine chero nzira dzekuti iwe upe mhinduro kune yako Yemukati Management system, ndapota vaudze.
Ini ndaitoda kutora yepamusoro pa "Powered by iRise" kuti uwane rumwe ruzivo asi rwakabatana kune isina peji peji.
Iwe une masimba Meta tag eakakosha mazwi uye tsananguro pane peji. Sezvineiwo, injini zhinji dzekutsvaga hadziteerere zvakanyanya kune idzi, asi hadzigone kukuvadza. Yako meta tsananguro inoda rimwe basa, zvakadaro. Kana ndikaona peji rako rekarenda richiuya semhedzisiro, rondedzero yacho yaizouya se "Catalyze | Zviitiko ”. Handina chokwadi chekuti uchawana vanhu vazhinji vachidzvanya pane izvo! Panzvimbo iyoyo, ini ndaizoshandisa ndima yako yekutanga, "Iyo Catalyze chiitiko chekarenda ndeye yakazara sosi yezvose zviitiko? yemuno kana yenyika? izvo zvinofadza vaongorori vebhizimisi uye nyanzvi dzevashandisi. ”
Iko hakuna robots.txt faira mune yako dhairekitori. MaRobots.txt mafaera rega Tsvaga Injini bots kuziva kuti iwe unoda sei kuti yako saiti itsvage. Unogona kuwana tani yeruzivo paRobots.txt pane izvi FAQ peji.
Iko hakuna sitemap.xml faira mune yako dhairekitori uye hapana maRobots.txt faira kunongedzera kwairi. Chinokosha chekuita yako saiti yekutsvaga inoshamwaridzika kuri kuita kuti zvive nyore kune Injini dzekutsvaga mepu yako saiti uye uwane kuti zvinhu zviripi. A mepu igwara remugwagwa kune yako saiti. Zvikasadaro, maInjini ekutsvaga anongogona kutsvagisa saiti iyi nekubatanidza… vasingazive zvakakosha kana kuti saiti yakarongeka sei Ichi chingave chinhu chakakosha kupfuura zvese iwe chaungaite kune yako saiti! Verenga kumusoro pa Sitemaps.org
Ndiri kufungidzira pane ino yekupedzisira, asi nekupihwa kushomeka kwemashure-ekupedzisira maturusi ari kuburitswa paCatalyze, saiti yako ingangove isiri kubaya Google Blogsearch uye makuru maInjini ekutsvaga kana yako saiti ichichinja kana mablog blog akagadzirwa. Zvekare zvakare, hazvisi zvekuti yako saiti haizowanikwe, asi nekushingairira kuzivisa masevhisi akatenderedza mambure haazombokuvadza.
Iwe une imwe heck yewebhusaiti, Tom, asi hapana anoziva kuti iripo nekuda kwekushayikwa kweiyo chero Injini Yekutsvaga Kugonesa. Tarisa uone SEODigger pane yako saiti uye iwe unongouya chete ku "Catalyze". Zvese izvo zvemukati zvinoraswa kunze kwekunge iwe uchigona kuwana iyo saiti Kutsvaga Injini zvine hushamwari. Kana iwe uchinetseka kuti nei "Catalyze" iri rako kiyi, tarisa pane reverse kutsvaga pane yako saiti uye iwe uchaona nei.
Rombo rakanaka! Handina chokwadi kana uine zviwanikwa zvekuvandudza kuti uite shanduko kana iwe unofanirwa kushanda kuburikidza nekambani yakagadzira iyo application, asi pane rakati rebei basa rekuita.
Tags: blog tippingblog matipicatalyze
Rarama, Rudo, Kuseka
Gumiguru 23, 2007 pa 9:49 AM
Ehe! Mazano acho aive kufambira mberi kukuru kune yangu blog. Iye zvino ndiri kushanda nesimba kusvika 2000 akasiyana pazuva.
Basa rakanaka Douglas!